Tue, 15 Jun 2021 04:29:56 +0000
सवारी दुर्घटनामा पति गुमाएर माइतीको संरक्षणमा पुगेकी शिवसताक्षी नगरपालिका&ndash;११ की एकल महिला भीमाकुमारी चौधरी राईलाई नेपाली कांग्रेसले आर्थिक सहयोग जुटाएर घर बनाइदिएको छ । एकतले पक्की घरको निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको हुँदा अब रङरोगन गरेर हस्तान्तरण गर्न मात्र बाँकी छ । घर निर्माणमा रु १४ लाख खर्च भएको छ । नेपाली कांग्रेस शिवसताक्षी नगर समिति र पार्टीको वडा नं ११ समितिले संयुक्तरूपमा घर निर्माण गरेका हुन् । स्थानीय रामबहादुर चौधरीसँग विसं २०५९ मा अन्तरजातीय विवाह गरेकी भीमाकुमारीका पतिको एक दशकअघि मोटरसाइकल...
Tue, 15 Jun 2021 04:12:18 +0000
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका&ndash;४ स्थित महेन्द्रनगर बजारको ४ नं गल्लीबाट प्रहरीले गए राति नगद रकमसहित पाँच जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक थापा क्षेत्रीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा भीमदत्त&ndash;१८ का ६२ वर्षीय रामकृष्ण गुप्ता, ३३ वर्षीय सचिन गुप्ता, ४५ वर्षीय विनोद गुप्ता, ४२ वर्षीय सुनिल गुप्ता र ५५ वर्षीय मुरारी गुप्ता रहेका छन् । पक्राउ परेकाहरुको साथबाट रु ४६ हजार २०७ नगद रकम बरामद भएको छ । विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले विनोद गुप्ताको घरमा जुवातास खेलिरहेको जानकारी प...
Tue, 15 Jun 2021 04:08:43 +0000
जबर्जस्ती करणीका फरार प्रतिवादी वेदकोट नगरपालिका&ndash;५ का २० वर्षीय सिप्पु खुनालाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बहेला सामुदायिक वनमा शारीरिक अपाङ्गता भएकी युवतीलाई जबर्जस्ती करणी गरी खुना बिहीबार फरार भएका थिए । खुनालाई ओझाखाली वनमा लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापा क्षेत्रीले बताए । सोही घटनामा संलग्न अर्का धनबहादुर विकलाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको छ । &nbsp;
Tue, 15 Jun 2021 03:54:03 +0000
असार १ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यबस्था अनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याउँदैछन् । नेकपा एमाले नेतृत्वका ३, माओवादी केन्द्रका २ र कांग्रेस र जसपा नेतृत्वका एक एक प्रदेश सरकारले मंगलवार बजेटको&nbsp;तयारी गरेका छन् ।&nbsp; सरकार फेरबदलका कारण नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिला गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले अपरान्ह ४ बजे बजेट पेश गर्दैछ । त्यसअघि प्रदेश सभाको बैठकले आजै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दैछ । प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले सोमवार प्रदेश सभामा सरकारका नीति तथा का...
Tue, 15 Jun 2021 03:45:21 +0000
आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बूढीगङ्गा नदीमा आएको बाढीका कारण सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत हुँदै गएको छ । गत वर्ष साउन २५ गते बूढीगङ्गामा आएको बाढीले खेतीयोग्य जमीन बगाउनुका साथै बगरमा परिणत गरेको थियो । यस वर्ष पनि वर्षात्को समयमा नदीले निरन्तर कटान गर्दै जाँदा बाजुरा र अछामका दर्जनौँ बस्ती र खेतीयोग्य जमीन नदीले कटान गरेको छ । बडिमालिका नगरपालिका&ndash;२ को भौनेरा, ८ को रापक र सोही नगरपालिका&ndash;६ को बीरेखोलाको सयौँ मुरी फल्ने खेतीयोग्य जमीन कटान शुरु गरेको त्यहाँका स्थानीयवासीले बताएक...
Tue, 15 Jun 2021 03:13:29 +0000
मलाई राम्ररी बोल्न दिनुस् भन्दै अन्तर्वार्ताकारलाई थर्काए पुटिनले (भिडियो)
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकी च्यानल एनबीसीका केर सिम्मोन्ससँगको अन्तर्वार्तामा सिम्मोन्सलाई थर्काएका छन् ।&nbsp; सोमवार प्रसारित अन्तर्वार्तामा सिम्मोन्सले पुटिनलाई असहमतिका स्वर दबाउने कोशिश गरेको भन्दै घेर्न खोजेका थिए । उनले अहिले कारागारमा रहेका अभियन्ता अलेक्सी नभाल्नीको प्रसंग झिकेका थिए ।&nbsp; त्यसमा पुटिनले प्रतिप्रश्न गरे, &lsquo;म विपक्षीहरूबाट असुरक्षित अनुभव गर्छु भनी कसले भन्छ ? कसले तपाईंलाई यस्ता कुरा सुनाउँछ ? यो हास्यास्पद छ,&rsquo; उनले भने ।&nbsp; &nbsp; नभाल्नीको संस्थाका विरुद्ध हालैका ...
Tue, 15 Jun 2021 03:03:25 +0000
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट आज, आकार बढाएर ३८ अर्ब हाराहारीको बजेट आउँदै
&nbsp;लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज (मंगलबार) आगामी वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट ल्याउँदै छ । कोरोना नियन्त्रण र थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी ल्याउन लागेको बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा वृद्धि हुुने सरकारले बताएको छ । ३८ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । लुम्बिनी चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ३६ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।&nbsp; आइतबार प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको हो । असार १ मा संवैधानिक रूपमा प्रदेशले बजेट...
Tue, 15 Jun 2021 03:02:24 +0000
कोरोनाभाइरस भारत : पछिल्लो ७६ दिनयताकै कम संक्रमित पुष्टि
भारतमा सोमबार ५९ हजार ९५८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो&nbsp; बितेको ७६ दिनयताको सबैभन्दा कम संक्रमित पुष्टि भएको भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि ३० अप्रिलमा ५३ हजार २३७&nbsp; जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ७३२ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै सोही अवधिमा १ लाख २७ हजार २३२ जना संक्रमणमुक्त हुँदा सक्रिय संक्रमित भारतभर ६० हजार ५६ जना कम भएका छन् । अर्थात भारतभर कुल सक्रिय संक्रमित ९ लाख ८ हजार जना रहेका छन् । ...
Tue, 15 Jun 2021 03:01:52 +0000
लगातारको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्वत&ndash;बागलुङ खण्ड गए रातिदेखि अवरुद्ध बनेको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका&ndash;१ सहस्रधारामा पहिरो खस्दा रातिदेखि नै सडक अवरुद्ध भएको हो । निरन्तर पहिरो झरिरहेकाले तत्काल खुलाउन समस्या रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । वर्षा रोकिएलगत्तै खुलाउन प्रयास गरिने उनले बताए। यसैगरी छिमेकी जिल्ला म्याग्दी र मुस्ताङ जोड्ने बेनी&ndash;मालढुङ्गा सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ । जलजला गाउँपालिका&ndash;८ नाङ्लीवाङको फर्से, वडा नं ७ को केराबारी र वडा नं ३ को लामाख...
Tue, 15 Jun 2021 02:50:17 +0000
लगातारको वर्षापछिको पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध
लगातारको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्वत&ndash;बागलुङ खण्ड गए रातिदेखि अवरुद्ध बनेको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका&ndash;१ सहस्रधारामा पहिरो खस्दा रातिदेखि नै सडक अवरुद्ध भएको हो । निरन्तर पहिरो झरिरहेकाले तत्काल खुलाउन समस्या रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । वर्षा रोकिएलगत्तै खुलाउन प्रयास गरिने बताइएको छ । यसैगरी छिमेकी जिल्ला म्याग्दी र मुस्ताङ जोड्ने बेनी&ndash;मालढुङ्गा सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ । जलजला गाउँपालिका&ndash;८ नाङ्लीवाङको फर्से, वडा नं ७ को केराबारी र वडा नं ३ को ल...
Tue, 15 Jun 2021 02:46:18 +0000
तब न मेस्सी ! कोपा अमेरिकामा फ्रीकिकबाट गरे सुन्दर गोल (भिडियो)
लियोनल मेस्सीले कोपा अमेरिकामा सोमवार भएको खेलमा चिलीविरुद्ध फ्रीकिकमा निकै सुन्दर गोल गरेका छन् ।&nbsp; गोल गरेपछि उनले अर्जेन्टिनाका महानतम फूटबल खेलाडी डिएगो म्याराडोनालाई सम्मान गर्ने हिसाबमा सेलिब्रेट गरे ।&nbsp; यस फ्रीकिकसँगै मेस्सीले क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कीर्तिमान पनि भंग गरेका छन् ।&nbsp; सन् २०१८ को जुन महिनापछि पहिलोपटक मेस्सीले अर्जेन्टिनाका लागि पेनाल्टीबाहेक अन्य तरिकाले गोल गरेका हुन् । उनले हानेको कर्लिङ फ्रीकिकलाई चिलीका गोलकीपर क्लाउडियो ब्राभोले रोक्नै सकेनन् ।&nbsp; गोल गरेपछि मेस्सीले म्या...
Tue, 15 Jun 2021 02:32:41 +0000
एमाले कर्णाली संसदीय दलको बैठक बस्दै, फेरि सुरु भयो सरकार ढाल्ने खेल
एमालेका सांसदको फ्लोर क्रसपछि जोगिएको महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकार फेरि ढाल्ने खेल सुरु भएको छ । एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता&nbsp; यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा सरकार ढाल्न खेल सुरु भएको हो । यसैबीच एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठक मंगलबारका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा अदालतबाट पुनर्बहाली भएका चारजना सांसदलाई पनि बोलाइएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा सोमबार उनीहरु एमाले संसदीय दलमा फर्किएको जानकारी गराएका थिए । उनीहरु एमालेमा फर्किएर कँडेललाई सघाएमा मुख्यमन्त्री शाहीको पद ध...
Tue, 15 Jun 2021 02:28:27 +0000
यसपटकको युरोकपकै अहिलेसम्मको सर्वोत्कृष्ट गोल हाने शिकले (भिडियो)
चेक गणतन्त्रका स्ट्राइकर प्याट्रिक शिकले सोमवार स्कटल्यान्डविरुद्धको खेलमा यस संस्करणकै सर्वोत्कृष्ट गोल हानेका छन् ।&nbsp; उनले मैदानको बीच भागबाट गरेको प्रहार स्कटल्यान्डका गोलकीपर डेभिड मार्शललाई छक्याउँदै गोल भएको थियो ।&nbsp; &nbsp; शिकले ५० यार्डको दूरीबाट गरेको प्रहार निकै दर्शनीय थियो । उनैले चेक गणतन्त्रका लागि दुई गोल गरे । ४२ मिनेटमा गरेको पहिलो गोलपछि ५२ मिनेटमा गरेको दोस्रो गोल सर्वोत्कृष्ट ठहरियो ।&nbsp; &nbsp; स्कटल्यान्डका डिफेन्डर ज्याक हेन्ड्रीको शट ठोकिएर शिककहाँ आइपुगेको थियो र उनले ५० यार्डकै दूरीब...
Tue, 15 Jun 2021 02:24:17 +0000
कालीगण्डकी, तिनाउ र बबई लगायत नदीमा बाढी आउन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह
मौसम विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिन कालीगण्डकी, तिनाउ लगायतका नदीमा पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।&nbsp; मंगलवार सूचना जारी गर्दै महाशाखाले आगामी ३ दिन कालीगण्डकी, तिनाउ, पश्चिम राप्ती, बबई, भेरी र यसका सहायक नदीजलाधार लगायत गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको चुरे र तराई भई बहने केहि स(साना नदीमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने र केहीमा आकस्मिक वहाव हुने बताएको छ ।&nbsp; उनले ससाना नदी तटीय क्षेत्रमा समेत विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।&nbsp;
Tue, 15 Jun 2021 02:17:37 +0000
जम्मा एक भोटले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भए बेन्जामिन नेतान्याहु
इजरायलमा १२ वर्ष शासन चलाएका बेन्जामिन नेतान्याहु संसदमा जम्मा एक मतको अन्तरले हारेर प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।&nbsp; उनको स्थानमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी नेता नफ्टाली बेनेटले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका छन् । उनले परिवर्तनको सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएका छन् ।&nbsp; धेरै दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धनले संसदमा बहुमतका लागि आवश्यक ६० भोट ल्याएको थियो । नेतान्याहुको पक्षमा ५९ मत परेको थियो ।&nbsp; &nbsp; बेनेट सेप्टेम्बर २०२३ सम्मका लागि प्रधानमन्त्री रहनेछन् ।&nbsp; त्यसपछि उनले मध्यमार्गी दल येश आतिदका नेता याइर...
Tue, 15 Jun 2021 02:10:02 +0000
कुखुरालाई खुवाउने दाना नै कुखुराको विष त बनिरहेको छैन ?
&nbsp;शक्ति वा पोषणको स्रोतका लागि कुखुरालाई दाना खुवाइन्छ तर त्यही दाना कतै विष भइरहेको त छैन ? विभिन्न सरुवा रोग लागेर धमाधम कुखुरा मर्न थालेपछि अहिले व्यवसायी तथा विज्ञहरूसमेतले दानाको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न थालेका छन् । पश्चिम चितवन शिवनगरको अमृत पोल्ट्री फार्ममा गत वैशाख अन्तिमदेखि जेठ पहिलो सातासम्म दुई हजार दुई सयभन्दा बढी कुखुरा मरे । फार्मका सञ्चालक रामलाल भुसालले कुखुरा मर्नुमा विभिन्न प्रकारका सरुवा रोगसँगै गुणस्तरीय दाना नहुनु पनि कारण हुनसक्ने आशङ्का गरे । &ldquo;दानामा एकै किसिमको गुणस्तर छैन । हामीले ...
Tue, 15 Jun 2021 02:09:37 +0000
निषेधाज्ञाको समयमा चितवन जिल्ला अदालतले १५ वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाको समयमा भएका ६६ वटा मुद्दाको थुनछेकका क्रममा सो सङ्ख्यामा फैसला भएको हो । &nbsp; अदालतको तहसिलदार पुरुषोत्तम पौडेलका अनुसार अदालतले अभियोगका साथ पेश भएका सरकारवादी फौजदारी मुद्दा मात्रै हेरेको थियो । उनका अनुसार सो समयमा ८४ वटा मुद्दामा थुनछेक आदेश भएको छ भने एउटा मुद्दा प्रक्रियाकै क्रममा रहेको छ । थुनछेक आदेश हुनेमा एउटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत रहेको उनले बताए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासहित १५ वटा...
Tue, 15 Jun 2021 02:06:15 +0000
चितवनमा निषेधाज्ञाकै बीच ७८ कैदीबन्दी थपिए
कारागार कार्यालय चितवनमा निषेधाज्ञाको समयमा ७८ कैदीबन्दी थपिएका छन् । कार्यालय प्रमुख कमलप्रसाद काफ्लेका अनुसार नवलपुर जिल्ला अदालतबाट १४, चितवन जिल्ला अदालतबाट ६३ र मकवानपुरबाट एक जना कैद सजाय र पुर्पक्षका लागि पठाइएका हुन् । &nbsp; कोरोना कहरका कारण स्थानीय प्रशासनले गत वैशाख १७ गतेदेखि गरेको निषेधाज्ञाका समयमा सो सङ्ख्यामा कैदीबन्दी थपिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार थपिनेमा चितवनका मध्ये लागूऔषधका २३, जबर्जस्तीकरणीका १४, सवारी ज्यान मुद्दाका १२ र चोरी मुद्दाका सात जना रहेका छन् । यस्तै खोटा चलानका चार, काठ तस्कर...
Tue, 15 Jun 2021 02:02:28 +0000
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा मंगलवार सबैभन्दा महँगो कुरिलो रहेको छ ।&nbsp; कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास बोर्डले कायम गरेको मंगलवार थोक बजार दररेट अनुसार कुरिलोको प्रति किलो ५ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म रहेको छ ।&nbsp; यस्तै डल्ले च्याउको मूल्य न्यूनतम २ सय ३० देखि अधिकतम २ सय ६० रुपैयाँसम्म रहेको छ । हेर्नुहोस् अन्य तरकारी तथा फलफूलहरूको थोक मूल्यसूची &nbsp;
Tue, 15 Jun 2021 01:51:25 +0000
नहरमा बालुवा थुप्रिँदा विद्युत् सेवा अवरुद्ध
जैरीगाड जलविद्युत् आयोजनाको नहरमा बालुवा थुप्रिँदा डोल्पाको सदरमुकाममा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ । एउटा मात्र टर्वाइनबाट सञ्चालनमा रहेको विद्युत् सोमबार बिहानदेखि अवरुद्ध भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढकालले जानकारी दिए। &nbsp; दुई टर्वाइनमध्ये लामो समयसम्म एउटामा खराबी आएपछि एउटा मात्र सञ्चालन हुँदा सदरमुकामभरि विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । अहिले नहरमा बालुवा भरिएपछि एक मात्र टर्वाइनसमेत बन्द गर्नुपरेको हो । टर्वाइन थप्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा माग गरे पनि फाइल अड्किएको बताइएको छ । विद्युत् सेवा अवरुद्...
Mon, 31 May 2021 13:14:08 +0000
नझुक्किनु होला, बन्न लागेको यो भवन नेपालकै हो । सिंहदरबार कम्पाउन्डभित्रको पुतली बगैँचामा बन्दै गरेको सुविधासम्पन्न संसद् भवन हो यो । सिंहदरबार भित्र रहेको ग्यालरी बैठक २०७२ सालको भूकम्पले भत्काइदिएपछि नयाँ संसद् भवन बन्न लागेको हो । आफ्नै भवन नहुँदा २०६५ सालदेखि बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् भवनको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । सिंहदरबारभित्र बन्न लागेको यो भवनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै सभा हल र संसदीय समितिका बैठक कक्ष रहनेछन् । शनिवार सार्वजनिक बजेटमा संसद् भवन निर्माणका ल...
Sun, 11 Apr 2021 14:59:24 +0000
नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र अनेकौं विकृति र समस्या देख्न सकिन्छ । ‘सिंहदरबार’लाई नेपाल सरकार सञ्चालन गर्ने ठाउँ र शक्ति केन्द्रको रूपमा लिइन्छ । कानून बनाउने र कानून कार्वान्वयन गराउने निकाय सिंहदरबारभित्रै छन् । देशको ‘स्थायी सरकार’ भनेर चिनिने सयौं कर्मचारीले सिंहदरबारमा काम गर्छन् । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा देखिने तमाम बेथितिमध्ये तस्वीरमा देखिएको यो दृष्य पनि एक हो । ‘नो पार्किङ’ लेखिएको ठाउँमा लाइन लगाएर सवारी साधन पार्किङ गरिएको छ । त्यहाँ सरकारी सवारी साधन पनि राखिएका छन् । देख्दा सामा...
Sun, 21 Mar 2021 17:01:02 +0000
मुलुकको सभ्यताको केन्द्र बन्नुपर्ने राजधानी काठमाडौं प्रदूषण मात्र होइन, अव्यवस्थित संरचनाहरूका कारण पनि कुरूप बन्दै गएको छ । त्यसैका उदाहरण हुन्, राजधानीका सडकमा ठडिएका बिजुलीका पोलहरूमा देखिने तारका गुजुल्टाहरू । यो तस्वीर कालिमाटी चोकको हो । कालिमाटीमा मात्र होइन, राजधानीका प्राय:जसो स्थानमा यस्तै अवस्था छ । बिजुली, इन्टरनेट, केबल लाइन, फोनलाइन आदिका तारहरू अव्यवस्थितरूपमा गुजुल्टो पारेर पोलहरूमा झुण्ड्याइँदा राजधानी सौन्दर्यमा नै गिरावट आइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन न सरकारको ध्यान जान सकेको छ न त विद्युत् प्राधिकरणस...
Wed, 17 Feb 2021 15:51:27 +0000
यो साइनबोर्ड हेर्नुस् त । यसमा नेपालका सरकारी कार्यालयको प्रतिविम्ब झल्किन्छ । राजधानी काठमाडौंको मुटु रत्नपार्कनजिक रहेको प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय एवं प्रमुख वितरण केन्द्रको बोर्ड हो यो । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो कार्यालयको बिजोग हेरिनसक्नु छ । अपरिचित सेवाग्राहीले कसरी थाहा पाउने कार्यालय ? एउटा सामान्य बोर्ड समेत मर्मत गर्न नसक्ने प्राधिकरणको व्यवस्थापन क्षमतामा प्रश्न उठ्दैन ? यस्तै व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण प्राधिकरणमा कहिले मुसा त कहिले बिरालाले लोडशेडिङ गराउँदै आएक...
Tue, 02 Feb 2021 11:34:18 +0000
कोभिड– १९ नाम दिइएको कोरोना महामारीबाट जोगिन सर्वसाधारण नागरिकले हात धुन पाऊन् भनेर एक वर्ष पहिले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको सक्रियतामा काठमाडौं उपत्यकाका ठाउँ–ठाउँमा पानी ट्याङ्की राखियो । सर्वसाधारणको भीडभाड हुने चोक र अस्पताल अगाडिका ठाउँमा ठूला ट्याङ्की राख्न विभिन्न कर्पोरेट हाउसले सहयोग गरे । कोरोनाको सन्त्रास बाँकी नै छ, एकवर्ष पुग्दा नपुग्दै सार्वजनिक स्थानमा राखिएका ट्याङ्कीमा पानी छैन । ट्याङ्कीका धारा हराएका छन्, तर पनि ती ट्याङ्की अलपत्र र वेबारिसे ढंगले छाडिएका छन् । अलपत्र रूपमा सडकको छेवैमा राखिए...
Tue, 19 Jan 2021 12:13:12 +0000
नेपालको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा रहेको यो ग्यालरी बैठक वर्षौंदेखि प्लास्टिक ओढेर बसिरहेको छ । राणाकालीन समयमा झण्डै १ सय ५० वर्षअगाडि कलात्मक शैलीमा बनेको यो ग्यालरी बैठकबाटै पटक–पटक नेपालको संविधान जारी भएका थिए । २०७२ सालमा गएको विनासकारी भूकम्पपछि यो भवनलाई प्लास्टिक ओडाएर राखिएको छ । २००४ सालमा नेपालको वैधानिक कानून जारी गरेदेखि भारदारी सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक यही भवनमा बसेका थिए । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि २०६४ सालमा संविधान सभा निर्वाचन नहुञ्जेल यही भवनमा संसद्को ...
Wed, 23 Dec 2020 17:35:12 +0000
यो दृष्य निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय परिसरको हो । जहाँ गत निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपेटिका अलपत्र परेका छन् । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी २०७८ वैशाखमा नयाँ आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक निर्वाचनका बेला आयोगले ठूलो धनराशी खर्च गरी मतपेटिका किन्ने गरेको छ । एकपटक प्रयोग भएका मतपेटिका पुनः प्रयोग गर्न सकिने भए पनि संरक्षण अभावमा आयोगको कार्यालय परिसरमा अलपत्र परेका छन् । संरक्षण गरेर पुन: प्रयोग गर्न सकिने सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न पनि नसक्ने ? यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिले पुग्ने ?
Thu, 12 Nov 2020 12:45:20 +0000
नेपाल प्रहरी विपत व्यवस्थापन विभाग सामाखुशीको प्रांगणमा राखिएका पुराना गाडीको विद्रुप तस्वीर । वर्षौंदेखि अलपत्र छाडिएका यी गाडीका पाटपूर्जा खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् । नयाँ गाडी किन्ने तर पुरानाको संरक्षण नगर्ने अन्य सरकारी कार्यालयको प्रवृत्ति प्रहरीमा पनि देखिएको छ । सरकारी सम्पत्ति कुहिँदै गरेको यो ठाउँ नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी)को निवासनजिकै पर्छ । सरकारी सम्पत्ति यसरी कुहिएर जानुभन्दा काम लाग्ने गाडी मर्मत गरेर चलाउने, काम नलाग्ने गाडी लिलामीमा बेच्न सक्यो भने राजधानी यति प्रदूषित हुने थिएन कि ? यस्ता कब...
Thu, 22 Oct 2020 12:52:07 +0000
अन्तको कुरै छाडौं सिंहदरबारभित्रैको दुर्दशा देख्दैन राज्य !
सरकारी कार्यालयका साइनबोर्ड जनताले प्रस्टसँग देख्ने र बुझ्ने हुनुपर्छ, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । तर नेपालका सरकारी कार्यालयका साइनबोर्ड र नागरिक बडापत्रमा कतै अक्षर उक्किएका छन् भने कतै माकुराले जालो लगाएका छन् । सिंहदरबारभित्र कुन मन्त्रालय कता छन् भनेर जानकारी दिन खम्बामा राखिएका संकेत बोर्डहरू मेटिएर चिन्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तै दुर्दशा बालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकसँगैको ट्राफिक चिन्ह राखिएको साइनबोर्डको पनि छ । ट्राफिक चिन्हको अक्षर प्रस्ट देखिँदैन । दिनदिनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, विदेशी पाहुना लगायत भीभ...
Mon, 28 Sep 2020 11:50:36 +0000
नम्बर प्लेट मेटिएका सवारी छ्यापछ्याप्ती, दुर्घटना गराएर भागे को जिम्मेवार ?
यी तस्वीरहरू काठमाडौंका विभिन्न सडक र पार्किङस्थलमा खिचिएका हुन् । यीमध्ये कुनैमा नम्बर प्लेट मेटिएको छ भने कुनैको रंग उडेर अंक नबुझिने भएको छ । स्पष्ट नखुल्ने नम्बर प्लेट राखेर सवारी गुडाउनु कानूनविपरीत हो । यसमा ट्राफिक प्रहरीसहित सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । यो समस्या काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा वर्षौंदेखि विद्यमान छ । यस्ता सवारी आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भए वा दुर्घटना गराएर भागे कसरी पहिचान गर्ने ? कसरी नियन्त्रणमा लिने ? यस्तो गैरजिम्मेवारीपन कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? यति सामान्य समस्या समाधानमा सरोकारवाला...
Fri, 11 Sep 2020 12:43:17 +0000
महंगा गाडीमा घाँस फलाउँदै सिंहदरबार !
सरकारी कामकाजका लागि नयाँ सवारी साधन खरिदमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । तर भइरहेका सवारी साधनको उचित मर्मतसम्भार नहुँदा राज्यको सम्पत्ति कुहिएर गइरहेको छ । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र पार्किङस्थलमा अलपत्र छाडिएको यो गाडीमा घाँस उम्रेको छ । एकातिर राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसक्ने अर्कोतिर संरक्षण अभावमा कवाडी बनेका गाडीलाई यसरी अलपत्र छाड्दा सिंहदरबारको सौन्दर्यमा दाग लागेको छ । यसतर्फ कसले सोच्ने ? को जवाफदेही हुने ? हामी कहिले जिम्मेवार बन्ने ? यो तस्वीरले यातव प्रश्न जन्माएको छ ।
Sun, 23 Aug 2020 14:36:00 +0000
Fri, 14 Aug 2020 12:40:29 +0000
Fri, 14 Aug 2020 12:33:40 +0000
घाँसको घारीमा सवारी !
कीर्तिपुर सुन्दरीघाटस्थित अस्थायी प्रहरी पोस्टअगाडि बेवारिसे अवस्थामा रहेका मोटरसाइक र स्कुटरहरू । चोरी, बेवारिसे, दुर्घटनामा परेका र कागजपत्र नभएका यी साधन न वास्तविक मालिक दाबी गर्न आए, न त प्रहरीले लिलामी नै गर्‍यो । यी साधनहरूको सही व्यवस्थापन नहुँदा अहिले घाँस उम्रिएका छन् ।
Fri, 14 Aug 2020 12:27:05 +0000
राजधानीको मुटुमै सरकारलाई ट्राफिक चिह्नको 'कुरीकुरी' !
हात्तीसारस्थित जयनेपाल हलअगाडि रहेको ट्राफिक चिह्नको बेहाल । ठाउँ संकेत गर्नका लागि राखिएको बोर्ड खिया लागेर देख्दै नदेखिने हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।